दाेस्राे विवाह गर्दै गायिका अञ्जु पन्त, काे सँग गर्दै छिन् त विवाह ? भिडियाेमा हेर्नुहाेस् – Wow Sansar
दाेस्राे विवाह गर्दै गायिका अञ्जु पन्त, काे सँग गर्दै छिन् त विवाह ? भिडियाेमा हेर्नुहाेस्
January 4, 2021 222
दाेस्राे विवाह गर्दै गायिका अञ्जु पन्त, काे सँग गर्दै छिन् त विवाह ? भिडियाेमा हेर्नुहाेस् । लोकप्रिय गायिका अञ्जु पन्तले दोस्रो विबाह गर्ने मा,नसिकतामा छिन् । छोरी परितोषिकाले हरेक पल आमा अञ्जुलाई विबाहको सल्लाह दिँदै आएका कारण अञ्जुले छोरीकै कारण पनि छोरीको आ,त्मसम्मान र उनको इच्छा पू`रा गर्न र आफ्नो भावी जीवनलाई अगाडी बढाउनका लागि पनि विबाह गर्नु`को विकल्प नभएको बताइन् ।।
चर्चित सिने पत्रकार प्रकाश सुवेदी`को टक शो ग्ल्या,मर गफमा कुराकानी ग`र्दै गायिका पन्तले आँफ्नो काम र पेशालाई सम्मान गर्ने ब्यक्ति आएको खण्डमा विबाह गर्न आँफु तयार भएको स्विकारेकी छिन् । पूर्वपति मनोजसँग स,म्बन्ध वि,च्छेद भएको करिब १० वर्षको अन्तरमा थुप्रै विबाहका कुराहरु आएको भएता पनि अञ्जुले योबिचमा इ,न्कार गरेता पनि अब भने छोरीले,
विबाह गर्न सुझाईरहे`का कारण आँफु`ले पनि त्यस विबाहमा सोच्न थालेको कुराकानीका क्रममा बताएकी छिन् । अञ्जुका पन्तका अनुसार उनले अर्को वर्षसम्म विबाह ग`र्ने भन्ने प्रकाशको प्रश्नमा स्वि,कारेकी छिन् । यद्यपी उनले पूर्ण रुपमा भने स्विकारेकी छैनन । हेर्नुहोस् भिडियाे कुराकानि:-
चिनियाँका अर्बपति ज्याक मा हराएको हुनसक्ने आशंका, के हाे त सत्यता ? चिनियाँ अरबपति ज्याक मा केही महिनादेखि सार्वजनिक रुपमा नदेखिएका कारण हराएको आशंका गरिए`को छ । याहु न्युजका अनुसार अलिबाबाका संस्थापकसमेत रहेका मा करिब २ महिना`देखि सार्वजनिक रुपमा देखा परे`का छैनन् …।
केही हप्ताअघि सम्पन्न ट्यालेन्ट सो ‘अफ्रिका बिजनेस हिरोज’ मा सहभागी हुने कार्यक्रम तय भए पनि ज्याक मा उपस्थित नभएकाे पाईएकाे छ । १५ लाख अमेरिकी डलर पुरस्कार रहेको उक्त सोको निर्णायकमा ज्याक मा पनि रहने बताइएको थियो तर पछि उक्त सो`को वेबसाइट`बाट उनको नाम र तस्बिर हटाइए`को थियो ।।
अलिबाबा`का प्रवक्ता`ले त्यति बेला माले व्यस्त तालिकाका कारण निणार्यकमा सहभागिता जनाउन नसकेको बताएका थिए । गत अक्टोबर २४ मा सांघाईमा दिएको एउटा ‘विवादित’ अभिव्यक्ति`पछि माको व्यावसायिक एन्ट ग्रुप चिनियाँ नियमनकारी निकाय`को निगरानीमा रहेको बताइएको छ । उनले भनेका थिए, ‘अहिलेको अर्थ व्यवस्था औद्योगिक युगको लिगेसी हो ।।
हामीले नयाँ पुस्ता र युवाहरुका लागि नयाँ व्यवस्था खडा गर्नुपर्छ । हामीले वर्तमान प्रणालीमा सुधार ल्याउनुपर्छ ।’ गत डिसेम्बरमा चिनियाँ अधिकारीहरुले एन्ट ग्रुपमाथि एकाधिकारविरुद्धको अनुसन्धान गर्दै कम्पनीलाई पुन:संरचना गर्न निर्देशन दिएको थियो । माले को- रोना महामारीका बीच युरोप, अमेरिका र विश्व स्वास्थ्य (डब्लूएचओ) लाई मास्कलगायतका विभिन्न स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरेका थिए । सामाजिक सञ्जालमा अपडेट भइरहने माले अक्टोबर १० यता ट्वीट पनि गरेका छैनन् ।
Prevआज रातिबाट ७७ जिल्लामा यस्तो हुने स्वास्थ्य मन्त्रालयले भर्खरै जारि गर्यो यस्तो सुचना,
Nextवास्तुशास्त्रका अनुसार यी चीजहरु सिरानी मुनि राखेर सु’त्दा चम्किनेछ भाग्य
रामधुलाई खाएका Naraath Gautam र Sharmila Waiba यसरि मिले, फेरी २८ लाख काण्ड बाहिरियो (भिडियो सहित)
भाइरल सचिन भन्छन्,‘काठमाण्डौमा मलाई त केटीलाई कसरी चुप्पा गर्ने भनेर दाईहरुले सिकाउनु हुन्छ ।’ (भिडियोसहित)
रुकुममा जिउँदै बच्चालाई राँगाको पेटमा हाल्ने अनौठो चलन…